सार्वजनिक राय विरुद्ध जान कहिल्यै डर थियो जो महिला, ... पहिलो उनको प्रेमी 29 पुरानो वर्ष थियो, र मात्र पुरुष - 18 वर्ष मुनिका। यो सबै एक नर्तक रूपमा चिनिएको यो दिन छ, तर त्यो समय नृत्य शैली मा उनको अग्रगामी, उनको साथ मृत्यु त्यो मूर्तिकला र नृत्य आफ्नै दृष्टि perpetuate गर्न, विभिन्न देशहरूमा आफ्नै विद्यालय स्थापना गर्ने प्रयास पनि। यस्तो Aysedora Dunkan जसको जीवनी र यस लेखमा छलफल गरिनेछ, थियो। उनको scandalous र असामान्य जीवन कम extravagant छैन मृत्यु हराएको थियो। तर त्यो केवल अझै पनि छैन, इतिहासमा बाँकी थियो कि छाप।
भावी तारा को जन्म
प्रसिद्ध नर्तक भविष्य जीवनको पहिलो footplate उनको जन्म अघि अप आयोजित। बच्चालाई परिवारमा जन्मन थियो समय द्वारा पहिले नै तीन छोराछोरी थिए। तर आफैमा थियो केवल परिवारको। बुबा प्रमुख बैंक ठगी provernuvshy, आफूलाई लागि रोक्नु आफ्नो गर्भवती पत्नी र छोराछोरीलाई छोडेर भागे। उहाँले उसलाई सबै पैसा लियो र साना छोरी को जीवन मा देखा कहिल्यै।
यो 1877 थियो। या शायद, र 1878 औं ... बाहिर जनवरी थियो। र शायद मई ... तथ्य कि सानो दिदीले Andzhely Dunkan अज्ञात को जन्म सही मिति। त्यो उनको बुबाको रिस पुकारा अन्तर्गत हलचल सैन मा जन्म भएको थियो घर को Windows मुनि raged कि depositors धोखा।
यी परीक्षण, हुनत यसलाई उनको आमा पूर्ण आश्चर्य हुन, एक बेलेम महिला तोड्न थिएन गरियो। त्यो सबै बावजुद, छोराछोरी हुर्काउन र आवश्यक सबै तिनीहरूलाई प्रदान गर्न, कि आफु प्रतिज्ञा गर्नुभयो। पेशा आमा दिदीले एंजेला एक संगीतकार थियो द्वारा, र परिवार समर्थन गर्न, त्यो पाठ दिन गाह्रो काम थियो।
त्यो वास्तवमा तिनीहरूको सबै बच्चाहरु ल्याउन, र तिनीहरूलाई एक धेरै राम्रो शिक्षा दिन व्यवस्थित। तर त्यो शारीरिक सकिनँ, छोराछोरीलाई पर्याप्त व्यक्तिगत ध्यान दिनुहोस्। लामो समय को लागि घर मा एक्लै सानो केटी छोड्ने छैन क्रममा पनि प्रारम्भिक आमा केटी स्कूल, उनको वास्तविक उमेर लुकाउनु दिन।
तर, साँझ पूर्ण selfless आमा छोराछोरीलाई belonged। त्यो Chopin, Mozart, Beethoven र अन्य ठूलो रचयिता द्वारा आफ्नो मनपर्ने टुक्रा लागि प्ले। प्रारम्भिक बाल्यकाल देखि Dunkan Aysedora विलियम शेक्सपियर को कविता र कविता Persi Bishi Shelli सुने।
रुचि मानिसहरू दिदीले एंजेला अझै पनि एकदम एक युवा उमेर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो मात्र एघार वर्षको हुँदा, दिदीले एंजेला फार्मेसी स्टक मा काम छ जसले जवान Vernon नाम, मन परायो। त्यो अन्त मा मान्छे, एउटा अवस्थित संलग्नता साथ आउन बाध्य भएको थियो कि आफ्नो इच्छा मा त आग्रहपूर्ण थियो। उहाँले चाँडै विवाह भनेर उनको आश्वासन जब यो मात्र थियो, त्यो retreated।
तथापि, धैर्य दिदीले एंजेला nymphet disbanded थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न छैन। यो तथ्य स्पष्ट विकृति हुनेछ। उत्पीडन Vernon हुनत आग्रहपूर्ण, तर childishly निर्दोष थियो। तैपनि, उनको जीवनको प्रसङ्ग पहिले नै यो Eccentric व्यक्तिको चरित्र बारे धेरै कुरा छन्, यो आफ्नो अन्तिम सास सम्म रहनेछ हो। Aysedora Dunkan, आफ्नो पृष्ठ एक भन्दा बढी मानिसको नाम, पूर्ण धेरै पछि एक महिला रूपमा प्रकट मा फिट हुनेछ जीवनी।
सपना को संकल्प
आफ्नो पहिलो नृत्य स्कूल दिदीले एंजेला छ वर्ष खुलेको छ। छिमेकी छोराछोरीको भूमिका त्यहाँ विद्यार्थी थिए। निस्सन्देह, यो सिर्फ बच्चाको प्ले थियो। तर 10 वर्ष को लागि उनी र उनको बहिनी साँच्चै नृत्य निर्देशन कमाउन केहि छ। दिदीले एंजेला पाठ्यक्रम, समयमा बस छैन थियो जो, नयाँ नृत्य प्रणाली, बारे कुरा। केटी बस सिकाउनुभयो छोराछोरीलाई सुन्दर आन्दोलनहरु कि त्यो आफु spontaneously र की। यसलाई जो थियो, यो एउटा नयाँ प्रतिलिपि अधिकार सिर्जना गर्न पहिलो कदम पहिले नै थियो नृत्य शैली।
हामी अध्ययन शायद एक माध्यमिक विद्यालयमा एंजेला दिदीले दिइएको थियो भनेर भन्न सक्दैन। यसको विपरीत - यो सिर्फ सादा नीरस थियो। त्यो अक्सर स्कूल घन्टा र घन्टा, समुद्र तट साथ भटक तत्व को गर्जन सुन्न र आरामपूर्वक को छालहरू किनारामा रोल्ड हेर्दै संग भाग्यो।
तेह्र जवान Schoolgirl मा म छात्र पीठ त्यस पर्याप्त जला समय निर्णय, र विद्यालय बाहिर घट्यो। उनको जीवन, त्यो संगीत र नृत्य गर्न पूर्ण समर्पित गर्ने निर्णय गरे। कुनै पैसा र संरक्षण एक किशोरी लागि ठूलो सफलता एक नर्तक मरियम लुइस फुलर एक विद्यार्थी रूपमा उनको मा लिन सहमत भए।
महिमा को पीछा मा
केही वर्ष अध्ययन गरेपछि उसलाई आफ्नो आमा र भाइ लिएर, शिकागो जित्न गर्न प्रतिभाशाली तर अधीर दिदीले एंजेला। त्यतिबेला त्यो Dunkan Aysedora आफ्नो चरण नाम लिन्छ। तर शिकागो हुनत उनको प्रदर्शन, newfangled एक नर्तक को खुट्टा मा गिरावट कुनै हतारमा थियो र केही सफलता थियो। पोल्याण्ड देखि बेरोजगार आप्रवासी - तर त्यो पूर्ण 45 वर्षीया Ivana Mirotskogo को अनुहार मा राम्रो कला को एक धेरै विशिष्ट प्रेमी गर्न surrendered।
हामी गर्दा Isadora थियो छैन समय अझै गरिएका 17 वर्ष कि सम्झना र यो एकदम प्राकृतिक जोडीलाई थियो कसरी अनौठो र कल्पना गर्न सजिलो छ भने। उनको परिवार यस्तो पार्टी रोमाञ्चित थिएन, तर पनि खराब अवरोध तिनीहरूले मरम्मत छैन। र सार्वजनिक राय Isadora मतलब छैन खुलस्त थियो।
रोमन Isadora र Myrotske आधा एक वर्ष लामो थियो। यो युग को आत्मा मा विवाहपूर्वको को अवधि थियो। आफु प्रेममा एक जोडी अनुमति अधिकतम - यो समयमा चुंबन सँगै चलाउँछ।
अन्तमा, उहाँले विवाहको दिन नियुक्त, र एक उत्सव लागि तयारी सुरु भएको थियो। पत्नी र परिवारको आदरणीय आमा - सायद इतिहास एकदम फरक Aysedora Dunkan देखा थियो। किनभने Myrotske एक भयानक गोप्य राखिएको तर, यो भयो छैन - उहाँले पहिले नै विवाह भएको थियो, र आफ्नो कानुनी पत्नी लण्डन बस्थे। छिट्टै विवाह अघि, त्यो बाहिर उनको भाइ पाता र संलग्नता बर्खास्त गरिएको छ।
Isadora असफल विवाहको लागि ग्रस्त होइन, र न्यूयोर्क बोल्न भयो। यहाँ त्यो केही सफलता थियो। उनको impromptu भव्य सैलून प्रशंसा मा खुशी साथ नाच्छन्। तर यो अगाडि सार्न आवश्यक थियो डंकन थाह थियो।
त्यसपछि त्यो एक सय केही डलर को कुल को लागि उनलाई माग्छु गर्न, पत्नी स्थानीय धनी र विभिन्न pretexts अन्तर्गत हिंडे। यो पैसा आफैले आफ्नो आमा, भाइ र बहिनी लन्डन यात्रा गर्न एक ठाउँ किन्न पर्याप्त थियो। तर, यो पशुधन को परिवहन लागि पकड जाने आवश्यक थियो, तर Isadora र उनको परिवार न जीवनमा excesses द्वारा SPOILED थिएनन्, र यसैले एकदम सहन सकिने भएको यात्रा सौतेली।
लण्डन आगमन मा, त्यो सिधा सबैभन्दा महंगा होटल को एक, रात भरिया उहाँलाई चाँडै धक्का र तिनीहरूले बस रेल छन् भनेर भन्छन् र आफ्नो सामान ल्याउने जान्छ। त्यो एक कोठा र नास्ता आदेश, र सारा परिवार चुपचाप सबै धन कदम मा खर्च थिए, होटल टाढा पर्ची बिहान।
जीवन राम्रो हुँदैछ
यो पछिल्लो साहसिक थियो मलिन पहिचान नर्तक सनकी। जीवन Aysedory Dunkan witty र extravagant समाधान भरिएको छ। त्यो shamelessly तिनीहरूलाई वरिपरि मानिसहरू फाइदा लिए। यो मानिसहरूको विशेष गरी साँचो थियो। Isadora प्रणालीबद्ध आफ्नो honed प्रलोभन को कला र जब उत्साहित प्रशंसक यसलाई लागू गर्न मौका प्राप्त।
तर सबै को पहिलो, डंकन अझै पनि एक अभिनेत्री थियो। यो सहायता बिना हुनेछैन भनी आफ्नो प्रतिभा र महसुस पहिचान गर्न खोजे। र यो सहायता त्यसपछि लोकप्रिय अभिनेत्री कैम्पबेल, ताजा शैली को संभावना विश्वास र सामाजिक घटनाहरू मध्ये एक मा एक "विदेशी नर्तक" को रूपमा Isadora चर्को debut प्रबन्ध गर्ने को अनुहार मा आए।
Aysedora Dunkan र Yesenin
1921 मा, डंकन नृत्य को मास्को स्कूल खोल्न एउटा सरकारी निमन्त्रणा पाए। त्यो खुसीसाथ यो स्वीकार र खुसी भविष्यमा विश्वास - आफ्नै र यो ठूलो देश, परिवर्तन गर्न प्रतिबद्ध छ, रूस गए।
डंकन घरमा प्रबन्ध मिलाइयो जो स्वागत, एकैचोटि, Sergey Esenin आए। त्यसैले तुरुन्तै आफ्नो वर्ण को सबै उत्सुक GenericName र spontaneity संग आपसमा हतारिएको गर्ने, दुई उज्ज्वल र असाधारण व्यक्तित्व भेटे।
Yesenin Aysedora Dunkan र चाँडै पनि परे राजधानी मा गफ विषयको भयो, र। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य भाषा थाहा थिएन, धेरै फरक थिए, तर तैपनि पूरा गर्न छोडेनन्। तिनीहरूले कुनै पनि महत्वपूर्ण छाडेनन् उमेर मा फरक, वा एक दोभासे बिना कुरा गर्न नसक्नुको।
धेरै वर्ष मा पहिलो पटक, म गाँठ औपचारिक विवाह स्वतन्त्रता-Aysedora Dunkan बाँध निर्णय गरे। Yesenin पनि मत महिमा महिला, यो कदम छलफल एकदम प्राकृतिक छ।
Idyll दुई bohemians लामो पछिल्लो थिएन। यो सर्गेई डाह पत्नी को लोकप्रियता भनेर विश्वास छ। उहाँले घमन्डी थियो र ध्यान केन्द्र हुन आफूलाई चाहन्थे।
पहिलो आवेग थियो, उहाँले वर्ष बिताएर बाँया बाहिरी पत्नी imprints थप र थप सूचना भयो। पत्नी धेरै अशिष्ट छ संग Yesenin गऱ्यौ। अन्याय र आधारहीन दुरुपयोग को एक धेरै आफ्नो ठेगाना Aysedora Dunkan सुने। जसको पत्नी धेरै निन्दाले भोगे? सायद, केही हदसम्म, उनको त्यो बस रूसी भाषा बुझेनन् कि सुरक्षा गर्न। तर Yesenin आफूलाई पत्नी पिट्न अनुमति गर्न थाले। र यो अपील बस असम्भव थियो बुझ्न।
छोडपत्र समय मात्र कुरा थियो। तर पनि पछि आफूलाई विश्वासी Dunkan Aysedora न्यानो भावना Yesenin गर्न राखिएको। त्यो आफु केहि खराब वा कवि विरुद्ध अनादर गर्ने भन्न अनुमति कहिल्यै थियो।
1927 मा, Dunkan Aysedora नाइस थियो। त्यो कार छिटो चलाउनु र अक्सर खुला कार मा एक पैदल लागि जाने प्रेम गर्नुभयो। र यो घाम शरद ऋतु दिन, त्यो सामान्य रूपमा सवारी निर्णय गरे। एउटा सुन्दर रूमाल को घाँटी मा बांधन र प्रभावकारी आफ्नो फिर्ता फालिएको, त्यो कार मा बसे भने मित्र विदाई र स्पर्श गर्न चालक आज्ञा दिनुभयो। तिनीहरूले टाढा बन्द ड्राइव थियो गर्न। अन्त दुपट्टा तिनीहरूलाई मा tangled एक पाङ्ग्रा को spokes, हिट र स्त्रीको घाँटी भङ्ग। त्यसैले यसलाई inexorable मृत्यु overtook। Aysedora Dunkan बस्ने र तीव्र गतिमा जीवन deafening कर्ड, ठूलो स्वरमा आफूलाई घोषणा अन्तिम समय पूरा भयो।
पोर्ट्रेट Prishvina लिखित जी एस Vereyskim
बालुवा चित्रहरु विचित्रताहरू काम गर्दछ
रूसी कलाकार पावेल Tchelitchew: जीवनी, रचनात्मकता
ग्याँस-3102 "वोल्गा": प्राविधिक विनिर्देशों, रूपरेखा र फोटो
हरेक खानाको लागि नुस्खा सूप
कर्म कसरी सफा गर्न
के Gelendzhik को आकर्षण बिदाको समयमा अवलोकन गर्न सकिन्छ छन्
छाती प्लास्टिक - मूल र व्यावहारिक समाधान
स्थापना के हो? कम्प्युटर प्रतिष्ठानहरु र आफ्नो विवरण को प्रकार
अस्थानिक गर्भावस्था लागि Laparoscopy: सञ्चालनको सुविधाहरू, को प्रभाव